कोभिड–१९ संक्रमणमुक्त भएका वीरगञ्जका तीन जनामा म्यूकोर्माइकोसिस पुष्टि - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश २ ∕ कोभिड–१९ संक्रमणमुक्त भएका वीरगञ्जका तीन जनामा म्यूकोर्माइकोसिस पुष्टि
कोभिड–१९ संक्रमणमुक्त भएका वीरगञ्जका तीन जनामा म्यूकोर्माइकोसिस पुष्टि
औषधी उपलब्ध नहुँदा अन्यत्र रेफर गरियो
हेल्थ आवाज शुक्रबार, २०७८ जेठ १४ गते, १७:१८ मा प्रकाशित
जनकपुर–पर्साको वीरगञ्जमा कोभिड–१९ संक्रमणमुक्त भएकाहरुमा म्युकोर्माइकोसिस अर्थात कालो ढुसीको संक्रमण पुष्टि भएको छ । वीरगञ्जको मंगलम डाइग्नोष्टिक सेन्टरमा कोभिड–१९ संक्रमण मुक्त भइसकेका तीन जनामा म्यूकोर्माइकोसिस संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
वीरगञ्जका २५, ४५ र ५० वर्षका तीन जनाको केओएच परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिएको डाइग्नोष्टिक सेन्टरका सञ्चालक सिनियर कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट डा. अमरनाथ (एएन) ठाकुरले बताए ।
फङ्गस कल्चर गर्दा दुईजनामा म्युकोर्माइकोसिस प्रमाणित भएको ठाकुरले बताए । उनले भने, ‘दुई जनाको कन्फर्म भइसकेको छ । एक जनाको कल्चरको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।’
उनकाअनुसार म्युकोर्माइकोसिस दुई चरणमा पत्ता लाग्छ । पहिलो केओएच टेष्ट हो । यसले फङ्गस इन्फेक्सन छ–छैन पत्ता लगाउँछ । कुन फङ्गस इन्फेक्सन हो भन्ने थाहा पाउन कल्चर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एक साता लाग्छ ।
‘फङ्गस इन्फेक्सन छ भनेर प्रमाणित भएपछि उपचार सुरु गर्ने बाटो खुल्छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि कुन जाति हो भनेर कल्चर गरेर पत्ता लगाउँछौं ।’
म्युकोर्माइकोसिस खतरनाक फंगल संक्रमण हो । यो पछिल्लो समय कोभिड–१९ संक्रमितमा देखा परिरहेको छ । यसले संक्रमितको नाक, आँखा वा दिमागमा असर गर्न सक्छ । फोक्सोमा पनि फैलन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
नारायणी अस्पतालका डा. निरज सिंह पनि वीरगञ्जमा ब्ल्याक फङ्गसका बिरामी भेटिएको र दुई जनाको मृत्यु भइसकेको बताउँछन् । क्लिनिकल्ली भने पहिलो पटक प्रमाणित भएको छ ।
डा.सिंहकाअनुसार पछिल्ला दिनमा भेटिएका ब्ल्याक फङ्गसका बिरामीलाई चितवनका साथै भारतको पटना, लखनउ रिफर गरिएको छ । ‘समस्याबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हौं । औषधी व्यवसायीहरुसँग हारगुहार गरेका थियौं,’ डाक्टर सिंहले भने, ‘औषधीको व्यवस्था हुन सकेन । त्यसैले भारतका विभिन्न अस्पतालमा रिफर गरेका छौं ।’
भारतमा यसअघि ९ हजार जनामा यस्तो संक्रमण भेटिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए ।